तेश्रो बर्ष तिर लम्कदा - Own Things ~ आफ्नै कुरा
प्रकाशित गरिएको मिति : 11 August 2010
समय वितेको पतै नहुने , आज भनो भोलि भनो - अनबरत रुपमा बहिरहेछ ! घर छाडेको नी निकै भएछ , देश संकट ग्रस्त भएको नी धेरै भएछ , मुलुकमा शान्ति आउछ अनि घर फर्केर केहि दिगो हुने उधम गरौला भन्ने आशा गरेको’नी निकै भएछ ! हिजो हो जस्तो लाग्छ नाङ्गो खुट्टा लिएर / सिगाने भएर धुलोमा खेलेको अनि झुम्रे बल लाइ लातले हानेको ! अनि अहिले ति सब - हेर्दा हेर्दै / समझदा सम्झदै एउटा अतित भएर बसेछ , एका देशको कथा भएछ !
ठ्याकै आज भन्दा दुइ बर्ष अघि जानी नजानी रहरै रहरमा मैले ब्लगको शुरुवात गरेको थिए - त्यो पनि हिजै हो जस्तो लाग्छ ! मैले ब्लग खोल्न नसक्दा कैलाश जी ले यसो गर्नु उसो गर्नु भन्नु भएको नी हिजो जस्तो लाग्छ ! मलाइ थाहा थिएन यो एउटा वेबको नमुना हो भनेर त्यसैले मैले पहिलो पटक मेरो आफ्नै फोटोहरु उपलोड गरेको थिए ! ब्लगको टाइटल लेख्ने ठाउमा , “स्वागत छ तपाइँ लाइ मेरो ब्लगमा" भन्ने लेखेको थिए तर मलाइ यो नै ब्लगको टाइटल हो भन्ने पनि थाहा थिएन जुन ब्लगको न्वारन थलो हो भनेर ! निकै पछी थाहा भो र यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस तिर लागे तर नाम जुराउन नै सकिन केहि समय अघि “बेदनाथ ब्लग" पनि राखी हेरे तर अलिक निको लागेन किन किन ! यसो सोचो उसो सोचो कुनै चित नबुझ्ने - उस्तै हुने ब्लग टेम्प्लेटको विषयमा पनि ! मेरो ब्लगमा एसो हेरे – उपडेट गरेका कुराहरु ! सबै आफ्नै सोचाई , विचार र रहरको कुराहरु गन्थन रहेको छ ! अनि आफैलाई शेयर गर्ने सजिलो र भरपर्दो माध्याम भएको ले - यो साइनोको नाम दिए - “आफ्नै कुरा” भनेर !
अब सामान्यतया यो टाइटल र ब्लग टेम्प्लेट अनि ग्याजेटहरु परिवर्तन नगर्ने मनसाय लिएको छु , हुन् त पूर्ण रुपले चित बुझेर यस्तो कुरा गरेको होइन किन कि यो डिजाइनले नी निकै समय खादो रहेछ ! हुन् त प्रविधिसंग सके सम्म त परिवर्तन हुने चेष्टा त गर्ने नै छु ! अब यो ब्लगमा के के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ अनि के के भएन जस्तो लाग्छ भनिदिने जिम्मा हजुरहरु लाइ नै थाती राखे है !
मरो ब्लगमा पहिलो कमेन्टको रुपमा बसन्त दाइले एउटा पोस्टमा “ Nice blog Bednathjee!“ भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो तर मेरो उहा संग त्यस अघि चिनजान नै थिएन ! कसरि भेट्नु भो लिंक थाहा भएन ! अनि मलाइ यसरि फुर्काउने को हुनु हुदो रहेछ भनि लिंक पछ्याएको त … उहा को ब्लग त कति परिपक्व र बरिलै जस्तो पो रहेछ, गाठे !
यसरि नै साइनो बढ्दै गयो एक /दुइ हुदै …. आज धेरै को जमात हुन् पुगेको छ ! अब त रेगुलर रुपमा सबैका घर पसेर प्रतिक्रिया दिन नी हम्मे हम्मे पर्न थालेको छ ! तर यो ब्लगको दुनियामा नेपालीहरु पनि द्रुत गतिमा उर्भर भएको देख्दा -राम्रो प्रगती भए जस्तो लाग्छ ! पहिले नेपाली ब्लग र ब्लगर सिमित थिए आज त्यो रहेन ! अनि आफ्नो विचार , भावना र समाचारको लागि टिभी ,रेडियो र प्रत्रिकामा मात्र सिमित रहनु परेन - त्यो प्रथाको अन्त्य गराइदियो यो ब्लगको विकाशले ! हो त्यहि दुनिया र प्रविधि संगै रमाउदै आज म पनि यहाँ सम्म आइ पुगेको छु मेरो '”आफ्नै कुरा” लिएर ! तपाईहरुकै न्यानो साथमा ! खुसि लाग्छ ! मित्रहरुले देखाउनु भएको म प्रतिको सदभाव, माया प्रति, म सदा उहाहरुको ऋणी रहने'छु ! अनि आउदा दिनहरुमा पनि यसै गरि … थप टेवा पुर्याइदिनु हुने'छ भन्ने आशा राखेको छु !
मेरो ब्लग लेखनलाइ भिजिट गरेर सल्लाह , सुझाब र फलो अफ गरेर हौसला प्रदान गर्नु हुने फेस बुक र ब्लग मित्रहरु लगाएत सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु ! यो नाता / यो साइनो सधै प्रगाढ भै रहोस ! धन्यबाद !!
मित्रहरुको नाम छुट्ने डरले यसरि फोटो नै Snipping गरेर राखेको छु है ! अझै कोहि कतै छुट्न गएमा क्षमा चाहन्छु ! (फेस बुक बाट फलो गर्नु हुने ८६७ र ब्लगबाट ८२ )
Happy Blogging ! Happy Blogging !! Happy Blogging !!! ….
13 Comment / प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
नयां लाउरे (Naya Laure) said... August 11, 2010 at 11:38 PM
Congratulations on the occassion of 3rd birth day>>>>
दूर्जेय चेतना said... August 12, 2010 at 2:22 AM
बेदनाथजी, तपाईलाई शुभकामना है। बास्तबमा सबैको यस्तै कहानी छ सुरुका समयमा.. निकै अन्यौल नै रह्‍यो मेरो पनि। जे होस तपाईको आफ्ना कुरा ले निरन्तरता पाओस मेरो हार्दिक शुभकामना
Dilip Acharya said... August 12, 2010 at 6:29 AM
तपाईँले भन्नुभए जस्तै नेपाली ब्लगहरु संख्यात्मक रुपमा राम्ररी नै बढ्दैछन् । समयसँगै तीनमा प्रौढता र गुणात्मक सुधार पनि आउनेनै छन् ।
ब्लग सुरु गर्न जत्ति सजिलो छ त्यसलाई निरन्तरता दिन त्यत्ति नै मुस्किल। यो मुस्किल बाटोमा तीन वर्षे यात्रा पुरा गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई ।
आज यहाँ लेख्दा परक नपर्ला, मैले तपाईँको ब्लग पढन थालेको पनि करिब २ वर्ष भयो र यो २ वर्षको समयमा तपाईँको लेखाइमा पनि निक्कै "परिपक्वता" आएको छ । ब्लग लेखनले अरु केही नभए पनि आफूलाई व्यक्त गर्ने र जुनसुकै परिवेश र जुनसुकै विषयमा बोल्न (लेख्न) सक्ने भने बनाउँछ नै । यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो। आगामी दिनमा तपाईँको ब्लग अझै परिष्कृत बन्दै जाओस्...हार्दिक शुभकामना !!!
N K M said... August 12, 2010 at 7:24 AM
Wishing all the best in the coming years!!!
सूर्य/सिकारु said... August 12, 2010 at 3:44 PM
सफलतापूर्बक तेस्रो बर्षमा प्रबेश गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना बेद जी, साथै आगामी दिनहरुमा पनि उच्च सफलताको कामना ।
Aakar said... August 13, 2010 at 5:16 AM
Happy Birthday to your blog. Happy Blogging.
अनि दिलिप दाइले भनेझैँ, मैले नि follow गर्न थालेको करिब २ वर्ष हुनलाग्यो होला, पहिले को भन्दा उत्कृष्ट प्रस्तुतीहरु दिइरहनुभएकोछ । यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said... August 13, 2010 at 10:01 PM
धन्यबाद ! नयाँ लाउरे जी , दुर्जेय जी , दिलिप दाइ , N K M ji, सुर्य जी अनि आकार जी !
यहाहरुको माया , सद्भाव र सुझाब लागि सदा ऋणी रहने छु !
र आउदा दिनहरुमा पनि यस्तै साथ र सुझाबको अपेक्षा राखेको छु !
राजेश नतांश said... August 26, 2010 at 3:43 AM
तेश्रो वर्षगाँठको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । तपाईका पहिलाहरु यसरी नै अनवरत अगाडि बढिरहुन् ।
कलमबीर_घोताने said... August 26, 2010 at 11:51 AM
कलमबीर_घोताने said... August 26, 2010 at 11:53 AM
बेदनाथजी तपाईको ब्लग तेश्रो वर्ष प्रवेश गरेकोमा हार्दिक बधाई र शुभकामना छ है! दिलिपजीले भन्नु भएजस्तै निरतरता दिनु गाह्रो हुन्छ (जुन मलाई यहाँ महशुस भइरहेको छ), तपाईको निरतरतालाई भने कायम राख्नुस्।
Dhruba Panthi said... August 26, 2010 at 6:28 PM
मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना बेदनाथजी !!
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) said... August 31, 2010 at 6:29 PM
राजेश जी, कलमवीर घोताने जी & ध्रुब जी - यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यबाद ! यसरि नै सधै तपाईहरुको हौसला पाइरहु !
D DUS JI "उमेश गजुरेल" said... August 4, 2011 at 6:21 PM
बेदनाथ सर, तपाईको ब्लग तेश्रो वर्ष प्रवेश गरेकोमा हार्दिक बधाई र शुभकामना छ है!
धेरै दिन भएको थियो ब्लगसंसार मा प्रवेश नगरेको, हजुरको ब्लगको रूपरेखा पुरै बदलीएको रहेछ, खुसी लाग्यो